/ Ungazenza kanjani izinkomba ku-Word: Kuchazwe isinyathelo ngesinyathelo | Izindaba zamagajethi
Kunezinhlelo ezithile esizisebenzisa cishe nsuku zonke kwikhompyutha yethu. IMicrosoft Word ingenye yazo, kubalulekile empilweni yansuku zonke yezigidi zabasebenzisi. Kungaba ngomsebenzi noma ngezifundo, kujwayelekile ukuthi kufanele sihlele idokhumenti sisebenzisa lolu hlelo. Ngenxa yayo sinokufinyelela emisebenzini eminingi, yize kuvame ukuba nezici ezithile eziba nzima kubasebenzisi abaningi lapho beyisebenzisa.
Ukwakha izinkomba ku-Word kuyinto evame ukuletha izinkinga kubasebenzisi abaningi. Yize kuyinto esingayenza ngendlela elula impela. Ngokulandelayo sizokutshela ukuthi singazakha kanjani izinkomba kusihleli sedokhumenti, nganoma yisiphi isikhathi lapho sidinga ukuzisebenzisa khona.
1 Shintsha ukwakheka kwezihloko
2 Dala inkomba ku-Word
3 Enza ngendlela oyifisayo inkomba
Shintsha ukwakheka kwezihloko
Ngaphambi kokuqala ukwenza inkomba kumbhalo oseZwini, kubalulekile ukuthi sisebenzise ifomethi efanele ezihlokweni ezikulo. Into ejwayelekile ukuthi lapho sihlela idokhumenti, sisebenzisa izihloko zesigaba ngasinye kanye nezigatshana ezikulo. Kepha kubalulekile futhi ukuthi sisebenzise ifomethi efanelekile, esinayo embhalweni (Isihloko 1, Isihloko 2, njll). Njengoba inkomba isuselwa kulokhu ngesikhathi sokwakhiwa.
Ngakho-ke, uma sesinawo la mafomethi asetshenziswayo embhalweni, lapho-ke ukwenziwa kwenkomba eshiwo kuzoba lula kakhulu. Njengoba inkomba izothatha lezi zihloko ukudala amazinga futhi izoboniswa ngqo esikrinini. Ngakho-ke akukho okunye esizokwenza ngalomqondo, sikhululeke ngempela.
Ngakho-ke kuhle ukuya kulo mbhalo eZwini bese usebenzisa la mafomethi ezihlokweni eziqondisa isigaba ngasinye kuso. Indlela yokukwenza ilula impela, njengoba ubona esithombeni. Kumele ukhethe isihloko noma izinga ozolisebenzisa, ukuze lisebenze. Ukwenza lokhu kuzosisiza ukuthi siqinisekise ukuthi inkomba okukhulunywa ngayo izolungiswa kahle lapho siyakha, ngakho-ke konga isikhathi esiningi kulokhu. Uma sesikushintshile lokhu sesikulungele ukudala inkomba eshiwoyo.
Ungaliguqula kanjani iZwi libe yi-PDF
Dala inkomba ku-Word
Lapho sesenze lezi zinyathelo esigabeni esedlule, sikulungele ukuqala ukudala inkomba ku-Word. Izinyathelo okufanele zilandelwe zilula kakhulu kulesi sinyathelo. Ngaphambi kokuba uqale, kubalulekile beka ikhesa ekuqaleni kwedokhumenti. Njengoba inkomba idalwe endaweni lapho isikhombisi sikuyo, ngakho-ke singayenza ngephutha singene phakathi kwedokhumenti eshiwo. Lapho nje sibeka isikhombisi ekuqaleni, singaqala.
Eyokuqala okufanele siyenze ukuchofoza kusigaba sezinkomba, etholakala phezulu kwedokhumenti ku-Word. Ngokuchofoza kuso, izinketho ezikulesi sigaba zizokhonjiswa. Sibheka ngezansi ohlangothini lwesobunxele kwesikrini, lapho sibona inketho ebizwa ngokuthi Uhlu Lokuphakathi. Chofoza kuso, bese kuvela imenyu yokuqukethwe.
Ngemuva kwalokho sizokwazi ukubona ukuthi izinhlobo ezimbalwa zezinkomba ziyaphuma, lapho singakhetha khona. Kuzofanele sikhethe eyodwa yazo kuphela, ukuze kuthi ngemuva kwemizuzwana embalwa ikhonjiswe embhalweni wethu we-Word. Ngokuyikhetha, uzobona ukuthi izihloko noma izigaba esizakhe ngaphambilini sezivele zikhonjisiwe enkombeni eshiwo. Ngakho-ke akudingeki ukuthi singeze noma yini ngesandla. Ikhululeke kakhulu kulokhu. Ngaphezu kwalokho, njengoba sifaka izihloko ezintsha, zizofakwa ngokuzenzakalela kunkomba eshiwo.
Ngakho-ke, zonke izinguquko esizenzayo kulo mbhalo, njengenombolo yekhasi lapho kuqala isahluko esithile, lolu shintsho luzokhonjiswa kuleyo nkomba. Ngakho-ke konke kuzolunga kulokhu. Into ejwayelekile kulezi zimo ukuthi le nkomba ifakiwe embhalweni ku-Word ekugcineni, lapho sesiqedile ukuhlela, ukwenza konke kube lula ngalo mqondo. Ibuye inikeze ithuba lokuyihlela ekuqaleni. Ngamunye kufanele akhethe inketho ebonakala ikhululekile kakhulu esimweni ngasinye.
Enza ngendlela oyifisayo inkomba
Noma iyiphi inkomba esiyenze kudokhumenti eZwini ingenziwa ngezifiso. Banikezwa umsebenzi, ukuze umsebenzisi ngamunye azokwazi ukuwenza ngokwezifiso ngokuya ngombhalo abawudalile. Indlela yokufaka lo msebenzi ilula kakhulu, ifana nezinyathelo esizisebenzise ukuyakha.
Ngakho-ke, kufanele singene esigabeni sezethenjwa ngaphezulu kwesikrini. Okulandelayo, sichofoza inkinobho ukuthola uhlu lokuqukethwe, ukuze imenyu yokuqukethwe kuleso sigaba ikhonjiswe. Ngemuva kwalokho kufanele singene kunketho ebizwa ngokuthi «Uhlu Lokwezifiso Lokuphakathi», etholakala ngasekupheleni kwalowo menyu wokuqukethwe. Iwindi elisha bese livuleka esikrinini.
Kuleli windi sinochungechunge lwezinketho sokwenza ngokwezifiso le nkomba esizoyisebenzisa ku-Word. Izinketho eziboniswe kuleli windi yilezi:
Khombisa inombolo yekhasi: Uma sifuna le nkomba ikhombise ikhasi lapho isahluko siqala khona
Ukusetshenziswa kwama-hyperlink: Singasebenzisa izixhumanisi ezihlokweni zezinkomba, ukuze ukuchofoza kokunye kusiyise ekhasini okukhulunywa ngalo. Kungaba wusizo olukhulu, ikakhulukazi kumadokhumenti amade impela, kusiza ukuhamba ngemikhumbi.
Amafomethi: Singakhetha futhi ifomethi esifuna ukuyisebenzisa ezihlokweni zenkomba, kunezinketho eziningi esingakhetha kuzo ukuthi sikwazi ukwenza ngokwezifiso inkomba eshiwo ngaso sonke isikhathi.
Khombisa amazinga: Kungenzeka ukhethe inani lamazinga esifuna ukuwakhombisa enkombeni eseZwini. Lokhu kuyinto encike emazingeni esiwasebenzisile kulezo zihloko ezikumbhalo. Uma sisebenzise isihloko 1, 2, 3, 4, lapho-ke sizodinga ukusebenzisa amazinga amane. Kumele ivumelane nokusetshenziswa kwalezi ziqu.
Lapho izinguquko esizifunayo sezethulwe, singakunika ukuthi wamukele futhi inkomba okukhulunywa ngayo ibe njengoba besifuna. Sesivele singaphrinta idokhumenti eshiwo noma siyithumele ngeposi, noma yini okudingeka siyenze ngayo. Njengoba ukwazi ukubona, ukudala inkomba ku-Word akunzima.
Indlela ephelele ye-athikili: Izindaba zamagajethi » General » / Ungazenza kanjani izinkomba ku-Word
Sivivinye i-UE Wonderboom 2. entsha enamandla, enamandla amakhulu nangemodi entsha ye-Outdoor Boost